भारतीय मिडियालाई पूर्वराजाले यसरी हाने झापड, म हिन्दी बोल्न जान्दिन भन्दै भारतीय पत्रकारलाई नेपाली बोल्न बाध्य पारे, हेर्नुहोस् भिडियो – Gazabkonews
in मुख्य खबर, राजनीति, समाचार
काठमाडौं। देशमा भारतीय हस्तक्षेत्र अत्याधिक भइरहेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको र राष्ट्रियताको पक्षमा चर्को आवाज उठिरहेको समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग घटेको एउटा घटना अहिले चर्चामा छ । पूर्वराजाले भारतीय दादागिरीलाई नराम्रोसँग झापड हानेको भन्दै सामाजिक संजालमा चर्चा चलिरहेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अहिले भारतको दार्जिलिङमा छन् । उनका स्वकीय सचिव फणिराज पाठकका अनुसार उनी यही फागुन १९ गते दार्जिलिङतर्फ गएका हुन् । व्यक्तिगत रुपमा घुमघामको लागि भन्दै गएका पूर्वराजा यही दिन फर्किने भन्ने निश्चित भने छैन ।
‘एक हप्ताको लागि भनेर सवारी भएको हो तैपनि यही दिन फर्किबक्सिन्छ भन्ने निश्चित छैन’ पाठकले डिसीनेपालसँग भने । पूर्वराजा दार्जिलिङमा रहेका बेला एक पत्रकारले उनीसँग हिन्दीमा प्रश्न सोध्न खोजेका थिए । तर, पूर्वराजाले उनको प्रश्न बीचमै काट्दै भने ‘आइ डोन्ट नो हिन्दी’ अर्थात म हिन्दी बुझ्दिन । पूर्वराजाको यो जवाफपछि ती पत्रकार बाध्य भएर नेपालीमा प्रश्न सोध्न थाले । उनले नेपालीमै पूर्वराजासँग भारत आउनुको कुनै विशेष कारण कि भनेर सोधे । पूर्वराजाले अहिले केही विशेष छैन भनेर जवाफ दिए अनि अगाडि बढे । भारतको न्यूज २४ ले सोधेको पूर्वराजाका स्वकीय सचिव पाठकका अनुसार ती पत्रकार भारतीय च्यानल न्यूज २४ का हुन् ।
(161020) — KATHMANDU, Oct. 20, 2016 (Xinhua) — Nepalese Former King Gyanendra Shah speaks during the International Grand Hindu Conference in Kathmandu, Nepal, Oct. 20, 2016. More than 1,000 Hindus from across the globe have gathered in Nepal on Thursday to participate in the International Grand Hindu Conference. (Xinhua/Sunil Sharma) (dtf)